Duulimaadyadii tooska ahaa ee Nuur-Sultan ilaa London Heathrow waxay dib uga bilaabanayaan Air Astana
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyadii tooska ahaa ee Nuur-Sultan ilaa London Heathrow waxay dib uga bilaabanayaan Air Astana
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kazakhstan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Duulimaadyada waxaa ku shaqayn doona diyaaraddii ugu dambaysay ee Airbus A321LR, iyadoo wakhtiga duulimaadku uu yahay 7 saacadood iyo 15 daqiiqo oo London ka baxsan iyo 6 saacadood iyo 30 daqiiqo markay ku soo noqoto Nuur-Suldaan.
Air Astana waxay dib u bilowday duulimaadyadii Kazakhstan ee UK.
Air Astana waxay ku shaqaysaa Airbus A321LR waddada London.
Wadada London waxay shaqayn doontaa Sabtida iyo Arbacada.
Air Astana waxay dib u bilawday duulimaadyadii tooska ahaa ee caasimadda Kazakhstan Nur-Sultan ilaa London Heathrow markay ahayd 18-kii Sebtember 2021, markii hore waxay lahayd laba jibbaar toddobaadkii Sabtida iyo Arbacada.
Rakaabka u safraya Kazakhstan waxaa laga rabaa inay soo bandhigaan tijaabo xun oo COVID-19 ah oo la qaaday 72 saacadood kahor gelitaanka dalka.
Hawada Astana waa calanka sida Kazakhstan, oo fadhigiisu yahay Almaty. Waxay ka shaqeysaa adeegyada jadwalka, gudaha iyo kuwa caalamiga ah 64 marin oo ka yimaada xarunteeda weyn, Almaty International Airport, iyo xarunta labaad, Nursultan Nazarbayev International Airport.
Gegada Diyaaradaha Caalamiga ah ee Nursultan Nazarbayev waa garoon caalami ah oo ku yaal Gobolka Akmola, Kazakhstan. Waa madaarka caalamiga ah ee aasaasiga ah ee u adeega Nuur-Sultan, caasimadda Kazakhstan.
Madaarka Heathrow, oo markii hore loogu yeeri jiray Gegida Diyaaradaha London ilaa 1966 oo hadda loo yaqaan London Heathrow, waa garoon diyaaradeed oo weyn oo caalami ah oo ku yaal London, England. Waa mid ka mid ah lix garoon diyaaradeed oo caalami ah oo u adeega gobolka London. Dhismaha garoonka waxaa iska leh oo maamula Heathrow Airport Holdings.